Exposed Shower Valve၊ လက်ဖြင့် Shower of Faucet၊ လက်ဖြင့်ကိုင်သည့် Shower Heads၊ သင်၏လိုအပ်ချက်များလက်ဖြင့် Shower
SHENZHEN KING OF SUN INDUSTRY CO.,LTD [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer , Trade Company အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , Other Markets , West Europe , North Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:81% - 90% Cert:ISO9001, CE, Test Report ဖေါ်ပြချက်:ထိတွေ့ရေချိုးခန်းအဆို့ရှင်,လက် Shower Faucet,Hand Held Shower Heads,လက်ရေချိုးခန်း,ရေပန်းရေချိုးခန်း,
Home > ထုတ်ကုန်များ > ရေချိုးခန်းအရောနှော > ထိတွေ့ရေချိုးခန်းအဆို့ရှင်
ထိတွေ့ရေချိုးခန်းအဆို့ရှင် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ထိတွေ့ရေချိုးခန်းအဆို့ရှင်, လက် Shower Faucet ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Hand Held Shower Heads R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Wall Mounted ရေချိုးခန်းအချိန်ကြေးဝါအဆို့ရှင်နှောင့်နှေး
Wall Delay Shower Valve ၌တည်၏
ဒီ အပူထိန်းအပူအအေးပေးစက်ကိုရေစုပ်စက် သည်အဆင့်မြင့်သောကြေးဝါဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားပြီးအဓိကကိုယ်ထည်ဖြစ်သော Zinc alloy လက်ကိုင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ SMA spring နှင့်အတူအပူထိန်း ကိရိယာအဆို့ရှင် သည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာတုန့်ပြန်ရုံသာမကရေစီးဆင်းမှုနှင့်အပူချိန်ကိုတိကျမှန်ကန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်သည်။5နှစ်မျှယိုစိမ့်အာမခံပါသည်။...
ဤ ထိတွေ့နေသောအဆို့ရှင် သည်အဆင့်မြင့်သောကြေးဝါဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသောအဓိကကိုယ်ထည်ဖြစ်သော Zinc alloy လက်ကိုင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ကောင်းမွန်သောကြွေကြွေပြားချပ်ပြားတစ်ချောင်း၊ ၅ နှစ်တာယိုစိမ့်မှုမရှိခြင်းအာမခံပါသည် Shower Mixer Valve သည်နံရံနှင့်ချိတ်။ လွယ်ကူစွာရှေ့ထားမျက်နှာပြင်ပြားကိုလည်ပတ်စေသည်။ 2pcs S-unions ၏ 1/2...
ကျွန်ုပ်၏ရေချိုးခန်းနှင့်ရေပန်းပါ ၀ င်သောမီးဖိုချောင်သုံးများနှင့်ကိုက်ညီမလား ရေချိုးခန်းဆေးရည်အားလုံးသည်သင်၏ရေချိုးခန်းနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်သင်ရွေးချယ်သောရေချိုးခန်းရေပိုက်သည်သင့်ရေချိုးခန်းနှင့်ကိုက်ညီရန်သေချာစေရန်အရေးကြီးသည်။ စံ faucet တူးဖော်ခြင်းစင်တာများ, Single- အပေါက်သို့မဟုတ်ကျယ်ပြန့်ဖြစ်ကြသည် Handy ၏...
နှစ်ခုတွင်း၌မြို့ရိုးပေါ်မှာရေချိုးခန်းရောနှောကိုထိပုတ်ပါ installs ထိတွေ့, တွင်းအကြားအလယ်ဗဟိုအကွာအဝေး 150mm ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုတည်းလီဗာရှေ့အပေါ်ညင်သာစွာလည်ပတ်။ ဆူညံသံနည်းပြီးသက်သောင့်သက်သာစီးဆင်းမှုသည်သင့်အားနေ့စဉ်ကောင်းမွန်သောရေချိုးခန်းမျှဝေရန်သင့်အားခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ဤသည် နံရံကပ်ရေချိုးခန်းရောနှောတပ်ဆင်ထားသည် faucets...
ဤ ထိတွေ့သည့် ရေချိုးခန်းရေပိုက် သည်အဆင့်မြင့်ကြေးဝါနှင့်ခရိုမီတာပြီး Zinc alloy lever ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ mm ၃၅ မီလီမီတာကြွေပြားချပ်ပြားတစ်ခု၊ ယိုစိမ့်မှု ၅ နှစ်အာမခံပါသည်။ နံရံပေါ်တပ်ဆင်ထားသည့်ရေချိုးခန်းရောနှောဆေးထိုးစက် သည်ရိုးရှင်းစွာချိတ်ဆက်ထားပြီးရှေ့ဘက်တွင်လွယ်ကူစွာကိုင်တွယ်နိုင်သောပြားကိုလည်ပတ်စေသည်။ 2pcs...
Handy shower mixing valve မှထုတ်ကုန် များသည်ခိုင်ခံ့သောလိုင်းများနှင့်ချောချောမွေ့မွေ့သောပေါင်းစပ်မှုများအားအမှန်တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောဒီဇိုင်းများပြုလုပ်ရန်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဤ ထိတွေ့နေသောအဆို့ရှင် သည်အဆင့်မြင့်သောကြေးဝါဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသောအဓိကကိုယ်ထည်ဖြစ်သော Zinc alloy လက်ကိုင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။...
နံရံတွင်တပ်ဆင်ထားသည့်ထိတွေ့နိုင်သောအဆို့ရှင်ရေချိုးရေမိုးရေချိန်သည်အချိန်အဆို့ရှင်အဆို့ရှင်ဖြစ်သည်။ ကြေးနန်းအဆို့ရှင်သည်ကြေးဝါကိုယ်ထည်ပိတ်သည့်အရာတစ်ခု chrome finish.Time Delay Valve အချိန်ကြာချိန်ကို ၁၂-၁၅ စက္ကန့်ကြာအောင်ဖောက်သည်၏တောင်းဆိုချက်အတိုင်းလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သည်။ လက်ကိုင်ရေချိုးခန်း၊...
နံရံတွင်တပ်ဆင်ထားသောဖုံးကွယ်ထားသောအဆို့ရှင်ရေချိုးခန်းမိုးရေချိန်များသတ်မှတ်ထား။ Brass Shower Valve သည်ကြေးဝါကိုယ်ထည်ပိတ်ထားသောအရာတစ်ခု chrome finish.Time Delay Valve အချိန်နှောင့်နှေးမှုကို ၁၂ မှ ၁၅ စက္ကန့်ကြာအောင်ဖောက်သည်၏တောင်းဆိုချက်အတိုင်းချိန်ညှိနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Shower Accessories...
Shower Faucet: နှစ်ခုအုတ်ရိုးကိုတပ်ဆင်ထား installation.Single လွတ်လပ်သော switch ကိုကိုင်တွယ်။ အလိုအလျောက်ရောနှောသောအရာတစ်ခု။ အပူပေးသည့်အချိန် - ၅ နှစ်ကြာမြင့်ခြင်းမရှိခြင်း။ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောကြေးဝါ၏အဓိကကိုယ်ထည်ဖြစ်သည်။ ခရင်မ်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည့်အရောင်တောက်ပသည်။...
Rain Bath Shower Faucet၊ ကြေးဝါ faucet လက်ကိုင်များ၊ အလှဆင်အခွံမာများ၊ ရေချိုးခန်းအရောအနှောပြောင်းလဲခြင်းအဆို့ရှင်များ၊ နံရံတပ်ဆင်ထားသည့်ရေချိုးခန်းအရောအနှောနံရံအဖုံးများ၊ အခွံမာများနှင့်ပေါင်းသင်းသောအဆစ်များ၊ occurring.Shower Faucet သည်အလိုအလျောက်ကြွေပြားရောစပ်မှုအဆို့ရှင်ဖြစ်ပါသည်...
Shower Tub Mixer သည်နံရံနှင့်ကပ်။ ရှေ့တွင်လွယ်ကူစွာကိုင်တွယ်နိုင်သောပြားကိုလည်ပတ်စေသည်။ 2pcs S-unions ၏ 1/2 "x 1/2" နှင့်အလှဆင်အဖုံး 2pcs အပါအဝင်, အစိတ်အပိုင်းများကို, အပေါက်တွေကိုရှောင်ရှား, အပေါက်ကိုဖြည့်ရှောင်ကြဉ်ရန်တပ်ဆင်ထားရန်လွယ်ကူလူ့စွမ်းအင်ချွေတာ, အခမဲ့တပ်ဆင်ထားသည်။ ဒီ Shower Faucet...
တရုတ်နိုင်ငံ ထိတွေ့ရေချိုးခန်းအဆို့ရှင် ပေးသွင်း
Exposed Shower Valve သည်ရိုးရိုးလေးရေချိုးသည့် faucet ဖြစ်သည်။ single lever သည်အလိုအလျောက်လည်ပတ်နိုင်ပြီးအလိုအလျောက်ရောနှောသည့်အရာတစ်ခုဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ အကြမ်းခံသောကြွေထည်ပစ္စည်းတစ်ခုသည်စက်ဘီး ၅၀၀၀၀၀ ကိုယိုစိမ့်မှုမရှိစေရန်အာမခံနိုင်သည်။ Electro plating ၏အထူသည် 8 မှ 12 microns အထိရောက်ရှိသည်။ ၄၈ နာရီကြာဆားမှုန်ရေမွှားစစ်ဆေးပြီးနောက်တွင်ပင်မျက်နှာပြင်သည်တောက်ပ။ ကြာရှည်ခံသည်။
လက် Shower Faucet